Nagarik News - दिल्लीमा जोडिएको दिल
होमपेज / नागरिक शनिबार / दिल्लीमा जोडिएको दिल
दिल्लीमा जोडिएको दिल	08 Jun 2013 २५ जेष्ठ, २०७०
पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य जति रसिक छन्, उनको जीवन उत्तिकै रोचक छ। 'समयमै मजा लुट्नुपर्छ' भन्ने मान्यतामा चलेका एस होटल्स एन्ड रिसोर्ट्सका कार्यकारी अध्यक्ष शाक्य व्यापारमै तल्लीन भए पनि यसलाई जीवन चलाउने माध्यमभन्दा माथि ठान्दैनन्। जुन ढंगले जीवन बिताएका छन्, त्यसैमा रमाइलो मान्छन्, पछुतो गर्दैनन्। उनको जीवन मसलेदार फिल्मजस्तो छ। गीत, संगीत, प्रेम, संघर्ष, रोमान्स र द्वन्द्व मिसिएको। फुर्सदको समयका लागि उनको कुनै योजना हुँदैन। 'परिवार र साथी भए समय कटाउन के चाहियो!' राजधानीको एम्बेसडर छाउनी अपार्टमेन्ट होटलमा कुराकानी सुरु गर्दा उनी व्यापारी बन्नुअघिको जीवन बयान गर्न अघि सरे। 'सेन्ट जेभियर्स पढेको, होस्टलमै बसियो। त्यतिबेलाका साथी परिवारकै सदस्यजस्तो लाग्छ,' कम्तीमा वर्षको एकचोटि देश–विदेशमा रहेका साथीसँग जुट्दा उनलाई दसैं आएजस्तो लाग्छ। 'त्यहाँ कुनै औपचारिकता हुँदैन, बच्चा बेलाकै जस्तो व्यवहार हुन्छ। हाँसो, ठट्टा, मुख छाडाछाड सबै चल्छ,' सन् १९७० मा सिनियर क्याम्ब्रिज गरेका शाक्य स्कुलले धेरैथोक सिकाए पनि राजनीति नसिकाएकोमा पछुतो मान्छन्। उनलाई देश चलाउन राजनीति 'जान्नैपर्ने' जस्तो लाग्छ। सहपाठीमध्ये प्रकाशमान सिंह (कांग्रेस नेता) मात्र राजनीतिमा होमिए। तैपनि बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडे, मनोजबहादुर श्रेष्ठ, प्रदीपमान सिंह, बुद्ध बस्नेत, डा. ज्योति धाख्वा, सुवोध रानालगायत सहपाठीको उन्नतिलाई उनी सेन्ट जेभियर्सकै देन मान्छन्। 'स्कुलमा हाम्रो जुन पारा थियो, त्यो देख्नेले यसरी गरिखालान् भनेर कल्पनै गर्दैनथे,' स्कुल बंक गरेर सिनेमा हलदेखि बालाजुको पौडी पोखरी पुग्न उनीहरूलाई कसैले रोक्न सक्दैन थियो। अहिले सम्झँदा उनी आफूलाई 'एभरेज' विद्यार्थीभन्दा बढी दाबी गर्दैनन्। औसत विद्यार्थीले 'एलिट स्कुल'मा भर्ना पायोचाहिँ कसरी? कथा रोचक छ। उनको घरमा बंगाली नृत्य प्रशिक्षकले डेरा लिएका थिए। संगले रंग सर्‍यो। सानैदेखि नाच्न सिपालु भए उनी। कक्षा एकको प्रवेश परीक्षा नाचेरै पास गरे। अतिरिक्त क्रियाकलापलाई जोड दिने स्कुलमा उनको नृत्यले नम्बर पायो। भर्ना भएदेखि १० वर्षसम्म निरन्तरत नाचिरहे। किशोर कुमारको गीत 'छोटा सा घर होगा'मा उनी यति नाचे, स्कुलका साथीसंगीले उनलाई गीतको बोलबाटै बोलाउन थाले। स्कुले पढाइ पूरा गरेसँगै उनले नृत्यबाट छुटकारा पाए। तर, नृत्यबाट टाढिए पनि गीत–संगीतबाट किन टाढिन्थे! अमृत साइन्स क्याम्पसमा भर्ना हुनेबित्तिकै गायक बन्ने जोस चढ्यो। लिड गिटारिस्ट बन्न इच्छा देखाए तिलकबहादुर मालीले। बेसमा सघाउन श्याम मानन्धर तयार भए। रिदमको जिम्मेवारी पर्‍यो ओमविक्रम विष्टको भागमा। यति काम भएपछि जन्मियो 'ग्रिन स्लिभ्स' ब्यान्ड। 'स्यान्टाना' ग्रुपको चर्चित गीत 'ब्ल्याक म्याजिक वुमन' उनीहरूले खुब गाए। बोर्डिङ पढेको पुस्ता न पर्‍यो, अंग्रेजी गीतमात्र उनीहरूको छनोटमा पर्थ्यो। 'ओमविक्रम रागप्रति यति सिरियस कि, त्यो गीत पनि रागसहित गाउँथ्यो, हामी खुब उडाउँथ्यौं,' शाक्य सम्झन्छन्, 'उसले त्यसलाई सिग्नेचर स्टाइलकै रूपमा स्थापित गर्‍यो।' कलेजसँगै ब्यान्ड पनि सकियो। एउटा ओमविक्रम विष्टले त्यो प्रयत्नलाई जीवित राखे। बाँकी साथी विष्टको 'फ्यान' बने । 'गीत गाउनु र हाहा–हुहु गर्नुलाई त्यतिबेला एउटै दर्जा दिइन्थ्यो, तैपनि म त्यो काममा यति समर्पित थिएँ कि, जीवनमा टर्निङ प्वाइन्ट नआएको भए फिल्म र संगीतमा लाग्थें,' शाक्यसँग कुनैबेला गीत गाउँथें भनेर चिनाउने एउटा फोटो छ। हेर्नेले प्रतिक्रिया दिन्छन्, 'ए, त्यतिबेला कपाल पनि रै'छ!' ...उनी विज्ञानको विद्यार्थी। मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्न छानिए। ठमेलको काठमाडौं गेस्ट हाउस सामान्य लजको रूपमा विकास हुँदै थियो। उनी बुबा/काकालाई सघाउन त्यहाँ जान्थे। घर बन्दै थियो, पर्खाल लगाउने विषयमा छिमेकीसँग झगडा पर्‍यो। भनाभन हुँदै गर्दा अर्कोघरको छतबाट हानेको ढुंगा उनको टाउकोमै लाग्यो। लामो समय उनी उठ्न सकेनन्। न्युरोका डाक्टरले भारतको भेलोर जाने सल्लाह दिए। अस्पतालमै भेटिएका दिल्लीका इन्जिनियरले उनको दिमागबाट इन्जिनियर बन्ने सपना उतारिदिए र होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न सल्लाह दिए। 'होटल म्यानेजमेन्ट गरेकाले महिनाको २० हजार कामाउँछन्, मजस्ता इन्जिनियरको पाँच हजार हुन्छ,' यो सुनेपछि उनको मन मोडियो। उपचार गर्न त्यति टाढा जानुपर्दा पिरोलिएको मनलाई नयाँ सम्भावनाले शान्त तुल्यायो। 'अस्पतालबाटै प्रोस्पेक्सटस मगाइयो, भर्ना प्रक्रिया सुरु भयो,' तीनै व्यक्तिसँगको दोस्तीले अहिलेको जग बसेको बताउन उनी हिच्किचाउँदैनन्। नयाँ दिल्लीमा होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ अन्तिम वर्षमा चल्दै थियो, नेपालबाट बिन्दु शेरचन त्यही कलेज पढ्न पुगिन्। 'नेपाली केटी देख्दा नेपालको न्यास्रोमात्र मेटिएन, मनै पो पग्लियो,' अब उनको जीवनले 'लभस्टोरी'को मोड लिन्छ। तीन वर्षको 'सेक्रेट लभ' जब 'ओपन' गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, शाक्यलाई सजिलो हुँदैन। 'नेवारमध्ये पनि शाक्य र बज्राचार्य बढी कट्टर हुन्छन्। मेरो परिवारमा म पहिलो व्यक्ति थिएँ अन्तरजातीय प्रेम गर्ने, सुइँको पाउनेबित्तिकै पूरा परिवार खलबलियो,' प्रेम र परिवारको तारतम्य मिलाउन उनले ठूलै विद्रोह गर्नुपर्‍यो। प्रेम, त्यो पनि थाकखोलाकी थकाल्नीसँग! सुन्नेले जिब्रो निकाले। सबैभन्दा बढी विरोध त उनका बाबुले गरे। 'प्रेम छोड्ने कि परिवार?' यो प्रश्नले धेरै टाउको दुखाएको उनी बताउँछन्। '३२ वर्षअघिको समाजमा प्रेम गर्नु सजिलो थिएन,' अन्धो प्रेमको बयान गर्न थाले उनी। 'आफ्ना सबै इच्छा पूरा गरिदिने परिवारलाई मैले चिढ्याउनै हुँदैनथ्यो, त्यतिधेरै मनपरेकी केटीलाई कसरी धोका दिनु? यो विरोधाभासले साह्रै सतायो,' त्यतिबेला उनले 'बेस्ट टिचर इज इनसाइड यु' भन्ने उक्तिको साहारा लिए। उनीभित्रको शिक्षकले भन्यो, 'आफूलाई दुःखी तुल्याएर परिवारलाई खुसी बनाउन सकिँदैन। बिहे बिन्दुसँगै गर्नुपर्छ।' उनले त्यसै गरे; सुरुमा आफू खुसी हुने, परिवारलाई बिस्तारै खुसी बनाउने। 'बिन्दुले मेरो कट्टर बुबाको पनि मन जितिन्, उनी छिट्टै परिवारको आत्मीय बनिन्,' उनलाई आफ्नो निर्णय क्षमताप्रति भरोसा जाग्दै गयो। परिवारलाई छोरो थाकखोला पस्ला भन्ने डर थियो, बिन्दु नेवारी बोल्न थालिन्। नेवारी भाषामात्र बोल्ने सासूसँग घुलमिल हुन सघायो। भन्छामा थकाली खनाको प्रवेश भएन, बिन्दुले नेवारी पक्वानमा आफूलाई दक्ष सावित गरिन्। दुई सन्तान जन्माएपछि परिवारमा अन्तर्जातीय द्वन्द्व पूरै समाप्त भयो। शाक्यकी छोरी पर्मिताले अमेरिकामा मास्टर्स गरिन्। छोराले पनि त्यहींबाट ग्राजुयट गरे। दुवै नेपाल फर्केर परिवारको व्यापारमा हात बढाएका छन्। छोरी एस होटल्समा मार्केटिङ हेर्छिन्, छोरो प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको काम गर्छन्। आफूले नेतृत्व गरेको व्यवसायमा शाक्यलाई श्रीमतीले अपरेसन डाइरेक्टरको भूमिकाबाट सघाएकी छिन्। 'सिंगो परिवारसँगै काम गर्दा मनोटोनस हुँदैन?'उनले यसको फाइदा–बेफाइदा दुवै बताए। 'व्यापारको स्ट्रेन्थ बढ्छ। म राम्री विदेशी केटीसँग ‰याम्मिएँ भने पनि श्रीमतीले आँखा तर्दिनन्, शंका गर्दिनन्। उनलाई व्यापारको मर्म थाहा छ,' उनले झेलेको बेफाइदा हो, 'अफिसदेखि बेडरुमसम्म गर्ने कुरा एउटै हुन्छ। घरमा पनि बोस बन्न खोज्दा कहिलेकाहीं ठाकठुक पर्छ।' काम र घरमा भिन्नता देखाउन नसक्दा उनलाई छोराछोरीले पनि कचकच गर्छन्। केही वर्षअघिसम्म फुर्सदमा परिवारसँगै घुम्न खुब रुचाउँथे। वर्षले ५९ काट्यो, त्यसमा रुचि घट्दै गएको छ। 'छ जना बहिनी छन्, फुर्सदमा उनीहरूसँगै पूजाआजामा निस्कन्छु। घरमै रमाइलो गर्छु, राजधानीमा राम्रा मल्टिप्लेक्स बनेपछि फिल्म पनि फुर्सद कटाउने माध्यम बनेको छ,' उमेरसँगै मनोरञ्जनको परिभाषा फेरिँदै गएको उनले महसुस गरेका छन्। 'युवा छँदा डिस्को गइयो, बार धाइयो, केटी जिस्क्याइयो,' ती ठाउँ बिरानो भयो भन्छन् शाक्य, 'अहिले डिस्को गए के भन्लान्! रेस्टुरेन्टमा पनि छोराछोरीको गु्रप भेटिन सक्छ।'पुस्तकप्रति उनको उति प्रेम छैन। व्यापारमा कामलाग्ने चिज भने खोजीखोजी पढ्छन्। इन्टरनेटले पुस्तकको आवश्यकता घटाएको छ। उपन्यास उनको प्राथमिकतामा पर्दैन। 'दिनको सुरुवात पत्रिका पढेर हुन्छ, एक्सरसाइज पनि त्यति गरिँदैन,' उनको दैनिकी यस्तो छ, 'नौ बजेअघि नै मेनेजरहरुलाई फोन गर्छु, १० बजेसम्म अपडेट हुन्छु। दिनभर अफिसको काममा व्यस्त, साँझ दैनिकजसो पार्टी पर्छ, १२ नबजी सुत्ने बानी छैन।' Tweet Leaveacomment Message *
फरक सुन्दरताधाराप्रवाह बगेको बगेकै छन्, उनी।मलाई भने अब कति बेरसम्म मेरो धैर्यले साथ देला भन्ने चिन्ता छ। एकाएक उनी आफ्नै सुन्दरताको कुरो फुस्काउँछन्। ‘म त आफू सुन्दर छु जस्तो लाग्छ,' उनी...	अमिताभ र अफिम युद्धमहान् अभिनेता अमिताभ बच्चनबाहेक पनि मित्रराष्ट्र भारतमा गर्वले नाम लिइने अर्का एक अमिताभ छन्। उनी हुन्, प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष। मानवशास्त्रमा स्नात्तकोत्तर तथा इतिहासमा विद्यावारिधि गरेका उनको बसाइ पहिलेदेखि नै...	चिनियाँ साहित्यसँगको संवादनेपाली स्रष्टाहरू धेरै पहिलेदेखि साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन जान थालेका हुन्। यो क्रम अहिले पनि जीवित छ। केही वर्षयता चिनियाँ साहित्यिक संस्थाहरूको निम्तोमा नेपाली स्रष्टाहरूको चीन भ्रमण बाक्लिएको छ।...	समय–समयको सिनेमापहिलो सिनेमा कति सालमा हेरेँ हुँला, खासै अन्दाज छैन । हामी सानो हुँदा हाम्रो परिवारमा सिनेमा हेर्नु एक प्रकारको कुलतका रूपमा गनिन्थ्यो । खासगरी सिनेमा हेर्ने महिलाले घरको बेवास्ता गरेर,...	‘फिल्मफेयर'मा प्रेमध्वजलाई ‘वान्समोर’बलिउडको चर्चित ‘फिल्म फेयर अवार्ड'ले जहिल्यै गायक प्रेमध्वज प्रधानलाई अतीतको याद दिलाउँछ। गत जनवरीमा यो समारोहको ५९ औं संस्करण हेर्न टेलिभिजनअगाडि बस्दा पनि उनको आँखामा सन् १९७० मा सम्पन्न १४...	सपनाको अस्थिपञ्जरअचेल मेरा सपनाहरु धूमिल हुँदै गइरहेका छन्। सपनाको शिखर–वृत्तमा उल्लासमय ढंगले रमाउनेहरुका लागि यो जति दुःखद्, निर्मम र कटु विषय अरु केही पनि हुन सक्दैन।	दुई ध्रुवदुई ध्रुव अर्थात् डा. धु्रवचन्द्र गौतम र धु्रव सापकोटाबीच थुप्रै असमानता छन्, तर तिनको किनारा एउटै छ। दुवैजना साहित्यको गन्तव्य खोज्दै हिँडेका छन्। असमानता वैचारिक र उद्देश्यपरकताको अर्थमा होइन। गौतम...	अहंकारी साधककाठमाडौं– साढे तीन वर्षअघि काठमाडौंस्थित ओशोधाराका आचार्य ओशो मैत्रेय (भीम तिमिल्सिना) ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चार अनुयायीलाई गद्दार घोषणा गरे, 'एलपी भानु शर्मा, रमेश नेपाल, रञ्जित कोइराला र स्वामी तथागत...	नागरिक शनिबार	एउटा पुरानो छापामार'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा...	दुइटा नाक भएका मान्छेम उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने,...	मेरो रंगयात्रामा सर्वनामतीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा...	भाषिक अव्यवस्थाकुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ...	भर्खरै...